Maro amin'ireo mpizaha-tany, avy any Japana , no voafetra ny fitsidihana ireo tanàn-dehibe manan-tantara - Tokyo , Kyoto ary Hiroshima , vokatry ny fiverenana an-trano miaraka amin'ny hevi-diso hoe ny tanin'ny Masoandro Rising dia metropole lehibe sy be mponina. Raha ny marina, ny faritr'ity faritra ity dia tena manankarena: ny zanatany japoney dia mirefy 3000 kilometatra avy any avaratra ka hatrany atsimo, izay manokatra karazana zava- mahatalanjona isan-karazany amin'ny ala mikitroka avy any amin'ny morontsirak'i Hokkaido mankany ala honko ao Okinawa . Ny anjara asam-pandraiketana manokana amin'ny famoronana lamaody mahavariana, izay matetika aseho amin'ny sary sy karajia avy any Japana, dia voatendry ho an'ny rivotra mifofofofo, izay misy 200 mahery any amin'ny faritry ny firenena. Ny sasany amin'izy ireo dia hambara amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Ny renirano lehibe indrindra any Japon
Amin'ny lesona momba ny jeografia any am-pianarana dia azo antoka fa mahatsiaro fa i Japon dia fanjakana nosy, satria tsy misy renirano maro. Ny halavan'izy ireo dia latsaky ny 20 km, ary ny faritry ny dobo dia tsy mahatratra marika 150 metatra toradroa. km, na izany toerana izany aza dia matetika ampiasain'ny mponina ao an-tanàna ary mitsidika mpizaha tany mba hikarakarana picnic sy fialam-boly an-kalamanjana. Raha te hahatsapa ny hery sy ny hery marina ianao dia mandehana any amoron'ny renirano lehibe iray ao amin'ny firenena. Mampahatsiahy anareo ny lisitr'ireo renirano lehibe indrindra any Japana:
Ny Reniranon'i Sinano (367 km) no renirano lehibe sy lava indrindra any Japon. Mipetraka ao amin'ny nosy Honshu izy ary mikoriana mianatsimo, mandavantaona akaikin'ny tanànan'i Niigata mankany amin'ny Ranomasin'i Japon. Ny halava lehibe dia mahatonga ny rano ho an'ny rano Sinano-gava, ary ny Okozu, iray amin'ireo lakandranon'ny renirano, dia manakana tanteraka ny tondra-drano ao Niigata ary mameno ny tanimbary eo akaikiny.
Ny renirano Tone (322 km) no renirano faharoa lava indrindra any Japon, hita, toa an'i Sinano, any amin'ny nosy. Honshu. Ny niandohany dia mitaky izany any amin'ireo tendrombohitr'i Etigo, eo an-tampon'ny Ominaki, ary avy eo mikoriana mankany amin'ny Oseana Pasifika. Avy amin'ny lafiny fijerena ny fizahan-tany, dia manan-danja lehibe ihany koa i Tonegawa: amin'ny loharanony dia toeram-ponenana malaza amin'ny loharano mafana Minakami-onsen. Ankoatra izany, ny tontolon'ny rano dia tena tsara ho an'ireo tia ny fanatanjahan-drano - kayak, rafting, sns.
Ny reniranon'i Ishikari (268 km) no loharano lehibe indrindra amin'ny nosy Hokkaido. Avy eo am-pototry ny tendrombohitra mitovy amin'io anarana io izy ary mikoriana mankany amin'ny Ranomasin'i Shina Atsinanana. Ny anarana Ishikari dia adika ara-bakiteny hoe "renirano mahery", izay mifanaraka tsara amin'ny bika aman'endriny. Raha any Hokkaido ianao ary manana fotoana maimaim-poana, azonao atao ny mitsangatsangana eo akaikin'ny rano, mankafy ireo kirihitra mamy sy ireo tendrombohitra mahafinaritra manakaiky ny renirano.
Ny reniranon'i Tadam any Japon (260 km), izay tena mampiavaka ny tendrombohitra sy ny ala manjavozavo. Afaka mivezivezy avy any amin'ny tanàna iray ianao any amin'ny lamasinina, mandalo tetezana eo ambonin'ny renirano.
Ny reniranon'i Tocati (196 km) dia tsy lehibe indrindra, fa iray amin'ireo renirano mahafinaritra indrindra any amin'ny Tanin'ny Masoandro. Ny loharano dia miankina amin'ny tendrony atsinanana amin'ilay tendrombohitra mitovy amin'io anaran'ilay nosy io. Hokkaido. Indrindra indrindra fa malaza amin'ny mpizahatany manerana izao tontolo izao ny tora-pasika eo am-bavan'ny Tokati River ao Japana, izay malaza amin'ny ranomandry tsy mahazatra manjelatra manerana ny morontsiraka manontolo. Noho ny mangarahara tsy manam-paharoa sy ny masoandro miposaka any amin'ny masoandro, matetika ny mponina no miantso azy ireo vatosoa na harena.
Ny tambajotra dia namely an'i Jada Pinkett-Smith sy ny zanany Jaden
Top-15 amin'ireo sarimiaina malaza indrindra ao amin'ny tantara
Jiro fohy hoditra
Ivan-tea - fanoherana
Robbie Williams dia miasa am-pahavitrihana ... eo amin'ny fiandohan'ny zaza fahatelo!
Fampiroboroboana sy fiheverana
Tailandey amin'ny fitafiana
Hepatomegaly - inona ity, ahoana no fomba fitondràna?
Tainkintana ny eucalyptus - fampiharana
Swimwear mini bikini 2015
Biby kavia amin'ny tavoahangy ho an'ny ririnina - recipe
Mikoriana amin'ny tarehy
Ahoana no hiatrehana ilay fientanam-po?
Kianjan'i Md Piera
Ny fiakanjo lava nitsofoka tany ambany
Diode ho an'ny plafôna